Ukuzivocavoca NgeBarbell Back - Okungcono Kakhulu Ongakwenza | Bezzia
Ngoba kuningi ukuzivocavoca okufanele sikwazi ukuhlenga imizimba yethu kahle futhi siyakwazi. Kepha kulokhu sikhuluma ngakho ukuzivocavoca okuhle kakhulu kwe-barbell back. Ngoba futhi ungomunye wabahlanganyeli abakhulu abasisizayo ekunyakazeni ngakunye, ukuze sithole imiphumela emihle kakhulu.
Kepha uma ungakabi nesiqiniseko sokuqala lapho, sekuyisikhathi sokuzivumela uthathwe eminye yemibono esikukhombisa yona. Khumbula lokho into enhle ukuthi ufaka amanye amarekhodi, kepha njalo kuye ngezidingo zakho bese uhamba kancane kancane ngokwesisindo, ngoba kuzoba nesikhathi sokwengeza.
2 Umugqa kaBarbell
3 Cindezela amahlombe
4 Isikwele sangaphambili 'Isikwele sangaphambili'
5 Ukudonsa: Ukuzivocavoca okuhle kakhulu emuva
Ngenye yezisekelo ezinhle uma kukhulunywa ngokuzivocavoca okuhle kakhulu kwe-barbell back. Ngaphezu kokuba ungomunye waziwa kakhulu futhi lokho kungukuthi ungasebenzisa ama-dumbbells. Kepha kulokhu sisele nenketho yokuqala esisijabulisa kakhudlwana. Kokubili emuva nangemuva komzimba kuyasizakala ukuthola umbono onje. Ngoba izothuthukisa ukuma ngaphezu kokuqinisa iqolo elingezansi. Ekuvivinyweni ngakunye uzogxila ekuphefumuleni futhi ngenxa yalokho, ukusakazwa kwegazi nakho kuzothuthuka. Omunye wemibono emihle, uma kungenzeka sibe nokungabaza!
Ngenye yokubheja okukhulu futhi siyazi ukuthi uyayithanda, ngoba impela unakho ngaphezu kokuhlanganiswa yi-barbell rowing. Ngesikhundla esifanele ekubulaweni ngakunye, kufanele kuthiwe usebenza ngaphezu kokucabanga kwakho ngoba umsebenzi uthe uzohamba kusuka ku-dorsal kuya ku-trapezius noma i-rhomboids nendawo ye-pectoral. Ngakho-ke sibhekene nomsebenzi ophelele futhi odingekayo. Vele, uletha ibha eduze ne-pectoral, ngakho-ke umsebenzi ugxila kwi-latissimus dorsi nase-trapezius.
Kuyiqiniso ukuthi kunezindlela eziningana zokwenza umsebenzi onjengalona. Kepha sisele nenye elula, yize kunengqondo ukuthi uzokwazi ukuzivumelanisa nezidingo zakho. Uma ufuna ukuqinisa imisipha kule ndawo, awukwazi ukuyiphuthelwa. Ngakho-ke kufanele ngaso sonke isikhathi siyethule enkambisweni yethu. Ukuze wenze lokhu, ungakwenza ngama-dumbbells noma nge-bar futhi uzoziphakamisa ukuqala endaweni yehlombe.
Isikwele sangaphambili 'Isikwele sangaphambili'
I-Las squat Ihlala ikhona njalo, ake sikhulume ngokuzivocavoca esikhuluma ngakho, ngoba ifuna ukuqeda inqubo eyisisekelo ngokwenza okuhle. Ibizwa njengenye yezivivinyo eziyisisekelo ezisebenzayo. Ngayo ungajabulela amandla amaningi emzimbeni ongezansi. Manje kufanele uthathe isikhundla esifanelekile futhi ubheje ekuqiniseni umzimba ongezansi kepha futhi nengxenye yamahlombe futhi nasemuva, okuyi-protagonist yangempela yanamuhla. Kepha ngalezi zivivinyo uzokufeza ngokufiphiza kweso.
Ukudonsa: Ukuzivocavoca okuhle kakhulu emuva
Sikhuluma nge-bar kepha kuliqiniso ukuthi asishongo ukuthi kanjani. Ngakho-ke ukudonsa kuzoba yingxenye ebalulekile kunoma iyiphi inqubo efanele usawoti wayo. Njengoba wazi kahle, lolu hlobo lwamabha luzolungiswa ezindaweni eziphakeme zodonga noma iminyango, ukuthola induduzo enkulu. Ngaphezu kwe ukwazi ukufaka umnyombo Kuyiqiniso futhi ukuthi uzothola amandla ekunyakazeni ngakunye ukuze uthole ukukhula okwengeziwe komzimba kepha ikakhulukazi emuva. Kuyindlela ephelele yokukwazi ukulawula isisindo somzimba wakho. Ngakho-ke ngakho konke lokhu, usuvele uyazi ukuthi akufanele ubashiye eceleni futhi kufanele ubazise kuzo zonke izinto ezifanelekile. Manje usuyazi ukuzivocavoca okuhle kakhulu kwe-barbell emuva ongaphuthelwa yikho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Ukuzivocavoca okuhle kakhulu kwe-barbell back
Yini i-gut microbiota? Amathiphu ama-3 wokuyithuthukisa